OEM စက်ရုံလူမီနီယမ်အလွိုင်းကုန်ပစ္စည်းများ Casting Die China Manufacturer
အကျိုးကျေးဇူးများ Casting Die,အမြဲတမ်းမှိုကာစ်လုပ်ငန်းစဉ်,လူမီနီယမ်အလွိုင်း Automotive ထုတ်ကုန်များ
Ruizhun Precision Metal Co., Ltd. [Guangdong,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား: Manufacturer Main Mark: Americas , Asia , East Europe , Europe , North Europe , West Europe ထုတ်ကုန်: 41% - 50% Cert: ISO/TS16949, ISO14001, ISO9001 ဖေါ်ပြချက်: အကျိုးကျေးဇူးများ Casting Die,အမြဲတမ်းမှိုကာစ်လုပ်ငန်းစဉ်,လူမီနီယမ်အလွိုင်း Automotive ထုတ်ကုန်များ
Home > ထုတ်ကုန်များ > လူမီနီယမ် Die ကာစ် > လူမီနီယမ်အလွိုင်းသေကာစ်ဖွဲ့စည်းခြင်း > OEM စက်ရုံလူမီနီယမ်အလွိုင်းကုန်ပစ္စည်းများ Casting Die
 OEM စက်ရုံလူမီနီယမ်အလွိုင်းကုန်ပစ္စည်းများ Casting Die
စွမ်းအင်, ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လုံခြုံရေးစိုးရိမ်၏သုံးခုကိုအဓိကပြဿနာများကိုယနေ့ဖြစ်လာကြပါပြီအမျှခေတ်မီမော်တော်ယာဉ်စွမ်းအင်ချွေတာရေးနှင့်စားသုံးမှုလျှော့ချခြင်း၏လိုအပ်ချက်များကိုအဆက်မပြတ်တိုးတက်နေကြသည်။ မော်တော်ယာဉ်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်အသုံးပြုမှုများ၏ဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးစည်းမျဉ်းများပိုမိုအရေးတကြီးဖြစ်လာကိုယ်ခန္ဓာ၏ပေါ့ပါးသောကိုယ်ခန္ဓာ၏လိုအပ်ချက်များကို ပို. ပို. တင်းကြပ်သောဖြစ်လာရသည်။ လူမီနီယမ်အလွိုင်းပိုကောင်းအသစ်ပြန်လည်နှင့်ပြန်လည်အသုံးပြုနှင့်အင်ဂျင်ဆလင်ဒါပိတ်ပင်တားဆီးမှု, ဆလင်ဒါဦးခေါင်း, ပစ္စတင်, စားသုံးမှုထူးထူးအပြားပြား, rocker လက်မောင်း, အင်ဂျင် mounting bracket က, လေတွန်းချိတ်ဆက်လှံတံနှင့် actuator အိမ်ယာများတွင်လူမီနီယံအလွိုင်း Cast ၏အဓိက application ကိုဖွစျစနေို
မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်အစိတ်အပိုင်းများများအတွက်စိတ်တိုင်းကျ Precision မဂ္ဂနီစီယမ် Anodized အစိတ်အပိုင်းများ အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်အစိတ်အပိုင်းများအဘို့အမြင့် Precision မဂ္ဂနီစီယမ်အလွိုင်း အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Related Products List: အကျိုးကျေးဇူးများ Casting Die , အမြဲတမ်းမှိုကာစ်လုပ်ငန်းစဉ် , လူမီနီယမ်အလွိုင်း Automotive ထုတ်ကုန်များ , ကုန်ပစ္စည်းများ Casting Die , ဖိအားအမျိုးအစားများ Casting Die , ဖိအားပစ္စည်းများ Casting Die , မှိုအစိတ်အပိုင်းများ Casting Die , ကုမ္ပဏီများ Casting Die